I-OPORTO INKENDELWE I-Bombarda Art District
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOporto Guest
UOporto Guest unezimvo eziyi-491 zezinye iindawo.
Le ndlu yanamhlanje kwaye ithokomele ibekwe kwikota yobuGcisa, kumbindi wedolophu yasePorto.
I-Apartment kumgangatho we-3 kunye nomthamo wabantu abayi-7.
Indawo yam isembindini wesixeko, kwiRua de Miguel Bombarda edumileyo. Ukunikezelwa kwendawo onokuthi uhambe ngayo kwimithambo ephambili yesixeko ngeenyawo.
Indlu iye yahlaziywa ngokupheleleyo ukuze ube nayo yonke intuthuzelo efunekayo ukuze uhlale ngokugqibeleleyo.
Ilungele iintsapho, kunye namandla okufumana ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezisi-7. Ifulethi lethu elitofotofo lixhotyiswe ngokupheleleyo ngegumbi lokuhlambela, kunye neetawuli ezikumgangatho ophezulu kunye neemveliso zokuhlambela zibandakanyiwe, ikwabonelela ngezixhobo ezahlukeneyo ezifana ne-oveni, i-microwave kunye nesomisi seenwele, zonke zikwenzela ukuthuthuzela.
Iindwendwe zinokusebenzisa umabonakude kunye ne-intanethi yasimahla, kunye nendawo yokutyela.
Wonwabele amava :)
Yonwaba, uzive ukhululekile.
Abantu basePorto basondela nje ngendlela yendalo yabanye ngaphandle kweentloni. Bathanda nje ukudibana nabantu abatsha kwaye banendlela yokuyenza ibe yendalo ngokupheleleyo, ke musa ukoyika, yiba nobubele kwaye ... wamkelekile!
Ngokuqhelekileyo baqonda iSpanish nesiNgesi kwaye bazama ukuzenza baqondwe ngezi lwimi
Umbuki zindwendwe ngu- Oporto Guest
Somos nativos do Porto, nascidos e criados aqui. Adoramos a nossa cidade, e gostamos muito de passar este gosto aos nossos visitantes, uma vez que como também adoramos viajar, sabe…
Sisoloko sifumaneka kwiindwendwe zethu!
Siza kukulinda eflethini, ukukwamkela kwaye sikunike ulwazi / iingcebiso ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndiqhele ukufikeleleka ngemfonomfono, sms, imessage, viber nowhatsapp.
Inombolo yomthetho: 51975/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porto